မိမိလက်ထက် အဆိုးရွားဆုံး ကစားပုံဖြစ်ကြောင်း နည်းပြဆိုးလ်ရှားဝန်ခံ၊ နိုင်ငံတကာပွဲများ ကြာ? - Yangon Media Group
မိမိလက်ထက် အဆိုးရွားဆုံး ကစားပုံဖြစ်ကြောင်း နည်းပြဆိုးလ်ရှားဝန်ခံ၊ နိုင်ငံတကာပွဲများ ကြာ?
မန်ယူနည်းပြဆိုးလ်ရှားက ဝုလ်ဗာဟမ်တန်ကိုရှုံးနိမ့်ပြီး အက်ဖ်အေဖလား ကွာတားအဆင့်မှထွက်ခဲ့ရခြင်းမှာ စိတ်ပျက်စရာ အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်ပြီး အဆိုပါပွဲမှအသင်း၏ခြေစွမ်းမှာ မိမိလက်ထက်အဆိုးရွား ဆုံးခြေစွမ်းလည်းဖြစ်ကြောင်း ဝေဖန်ပြောကြားခဲ့သည်။ မန်ယူအသင်းသည် ဝုဗ်နှင့်ပွဲတွင် ခြေစွမ်းအသာမရခဲ့ဘဲ ဂျီမီနက်ဇ်၊ ဂျိုတာတို့၏ဂိုးများကြောင့် ၂-၁ ဖြင့်ရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ဝုဗ်မှာ ယခုနိုင်ပွဲကြောင့် ၂၁ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် အက်ဖ်အေဖလားဆီမီးဖိုင်နယ်သို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည်။
မန်ယူသည် ဆိုးလ်ရှားလက်ထက်တွင် ချန်ပီယံလိဂ်၌ ပီအက်စ်ဂျီကိုအနိုင်ယူပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်သို့တက်နိုင်ခဲ့ခြင်း အပါ အဝင် ရလဒ်ကောင်းများရခဲ့သော်လည်း အာဆင်နယ်ကို ပရီးမီး ယားလိဂ်တွင်အရေးနိမ့်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုအခါ အက်ဖ်အေဖလား တွင် ဝုဗ်ကိုထပ်မံရှုံးနိမ့်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဆိုးလ်ရှားက ”ဒါဟာနောက် ပြန်လှည့်သွားတဲ့ ခြေစွမ်းမျိုးပါပဲ။ ဒီကို ကျွန်တော်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း အဆိုးရွားဆုံးကစားပုံလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အာဆင်နယ်နဲ့ပွဲမှာတုန်းက ကစားပုံကောင်းခဲ့ပြီး ရှုံးပွဲနဲ့မထိုက်တန်ခဲ့ပေမယ့် ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ထိုက်တန်တဲ့ရှုံးပွဲရခဲ့ တာပါ။ ပွဲအရှိန်ကို မြှင့်တင်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့သလို သူတို့ဂိုးသမားနဲ့ ခံစစ်မှူးတွေကိုလည်း ဘာဖိအားမှမပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ အကောင်း ဘက်ကတွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ အသင်းတစ်သင်းဟာ အမြဲတမ်း ခြေစွမ်းမကောင်းနိုင်သလို ဝုဗ်ရဲ့ခြေစွမ်းကိုလည်း လျှော့မတွက် သင့်ပါဘူး။ ဆီမီးဖိုင်နယ်ကိုမတက်နိုင်ခဲ့လို့ စိတ်ပျက်မိပေမယ့် ဒီနေရာမှာထိုင်ပြီး သုန်မှုန်နေလို့မရဘဲ ရှေ့လာမယ့်ပွဲတွေအတွက် အာရုံစိုက်သွားရမှာပါ”ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင်ဆိုးလ်ရှားက နိုင်ငံတကာပွဲများကြောင့် ကလပ် ပွဲများကိုခေတ္တရပ်နားထားခြင်းမှာ အသင်းအတွက်ကောင်းကြောင်း၊ ကစားသမားအချို့မှာ နိုင်ငံအသင်းများအတွက်ကစားပြီး အသင်း၏လက်ကျန်ပွဲများအတွက် အသင့်ဖြစ်နေမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ဆိုးလ်ရှားက ”တစ်ခါတရံမှာ နိုင်ငံတကာပွဲတွေဝင်လာတာ အထောက်အကူဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကစားသမားတချို့အနေနဲ့ နိုင်ငံအသင်းအတွက်ကစားပြီးနောက်မှာ လက်ကျန်ပွဲတွေအတွက် အသင့်အနေအထားမှာ ပြန်ဖြစ်နေကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ မန်ယူဟာ ဧပြီနဲ့ မေလတွေမှာ ခြေစွမ်းကောင်းရလေ့ရှိပါတယ်။ လိဂ်မှာရပ်တည်မှုကောင်းနေသေးသလို ချန်ပီယံလိဂ်မှာလည်း ဘာစီလိုနာနဲ့ကစားရဦးမှာဖြစ်လို့ ကလပ်ပွဲတွေပြန်လာချိန်မှာ ရလဒ်ကောင်းပြန်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ထားပါတယ်”ဟု ပြောကြား ခဲ့သည်။
ဇီဒန်းနှင့်အတူ ပျော်ရွှင်မှုများပြန်ရလာပြီဟု နာဗက်စ်ကြွေးကြော်